Maitiro ekuziva iyo IMEI ye iPhone yako | IPhone nhau
Paul Aparicio | | iPhone, iTunes, Zvidzidzo uye zvinyorwa
Iko kune mukana wekuti isu tingangoda kuziva yedu (kana chero yemumwe munhu) nhare mbozha. Tingazviita sei? Zvakanaka, zve izvi, uye uchifunga kuti iyo blog inonzi Actualidad iPhone, isu tingazoda kuziva chii chiri IMEI yeiyi iPhone. Pamusoro penzira inowanika pane chero chishandiso, Apple inotibvumidza kuti tione iyi kodhi nenzira shanu dzakasiyana.
Iyo IMEI kodhi ine manhamba gumi nemashanu, mamwe manhamba ayo dzimwe nguva akapatsanurwa kubva kune mumwe nemumwe, izvo zvinogona kutibatsira kuti tiite zvakanaka kutevedzera. Iwo manhamba anoumba IMEI nhamba anowanikwa uchishandisa iyo Luhn algorithm, Yakagadzirwa nasayendisiti Hans Peter Luhn uye basa rayo nderekudzivirira zvikanganiso zvevanhu kana uchizviisa mune imwe svikiro, senge pane mbozhanhare. Muchikamu chino isu tichaedza kujekesa kusahadzika kwese kwaungave uine maererano nekodhi yakakosha iyi.
1 Chii chinonzi IMEI?
2 Maitiro ekuziva iyo IMEI yeedu iPhone
2.1 Kubva pazvirongwa
2.2 Kubva pane keypad yenhamba
2.3 Kutarisa kuseri kwe iPhone
2.4 Tichitarisa mubhokisi
2.5 Kubva iTunes
3 How kukiya iPhone kubudikidza IMEI
4 How dzokuzarura iPhone kubudikidza IMEI
5 Inogona iyo IMEI yeiyo iPhone inogona kuchinjwa?
Dai nhare mbozha dzaive nendiro rezinesi, iyo rezenisi ndiro raizove IMEI yako. Iyo kodhi IMEI yefoni (yechirungu) Yepasi Pose Mobile Sisitimu Midziyo Chitupa) ndizvo kodhi inoratidza chishandiso zvisina kuenzana pasirese, uye inopfuudzwa nechishandiso kunetiweki kana uchibatana nayo. Iyi kodhi inoshandiswa mune chiitiko chekuba kana kurasikirwa kuvhara zviri kure chishandiso, mune iyo kesi iyo mbavha ingadai iine chishandiso chavaisakwanisa kushandisa.
Maitiro ekuziva iyo IMEI yeedu iPhone
Iyo yakapusa nzira yekutsvaga yedu IMEI iri kubva kune e iPhone marongero. Kune izvi isu tichaenda ku Zvirongwa / General / Ruzivo uye isu tinodongorera pasi. Tinogona kuona IMEI yedu pasi pekero yeBluetooth (muIOS 8.4.1).
Tsvaga iyo IMEI neiyi nzira ine imwe bhenefiti uye ndiko kuti, kana tikatamba masekondi mashoma pairi, tinogona kutevedzera nekunamatira chero kwatinoda.
Kubva pane keypad yenhamba
Iyi nzira yakafanana ne inogona kushandiswa pane chero imwe nhare mbozha. Kana isu takambozviita uye isu tichirangarira, isu tinogona zvakare kuishandisa pane yedu iPhone. Kuti uwane yedu IMEI kubva kuhuwandu hwekhibhodi tichaita zvinotevera:
Takatamba pa Yekhibhodi.
Isu tinotaipa * # 06 #. Nhamba yacho ichaonekwa pachiratidziri.
Kuti tibude, takabata OK.
Kutarisa kuseri kwe iPhone
Zvakareruka, asi zvinoshanda. Kana isu tichida kuziva iyo IMEI ye iPhone yedu, isu tinongofanirwa kuiburitsa titarise kudiki kudhindwakune izvo zviri pasi pemavara anoti iPhone. Kana tichifunga zvisizvo, tinogona zvakare kufunga kuti nyaya yacho yachinjwa, saka nzira iyi inogona kusatendeseka sezvatinoda kunze kwekunge tine chokwadi chekuti iPhone yagara iri mukutibata.
Hatizogara tine bhokisi nesu, hongu, asi iri imwe nzira yekuziva iyo IMEI ye iPhone yedu inogona kuuya inobatsira, kunyanya kana isiri pamberi pedu. Ingotarisa zvimiti padivi pe pazasi pebhokisi kuti uwane kodhi yedu.
Pakupedzisira, isu tinogona zvakare tsvaga yedu IMEI kubva kuTunes. Iyi nzira haisi yekuti yakanyanya kuoma, asi haina basa sezvo ichizoonekwa ichifamba uye hatizowana nguva yekuinongedza kana chero chinhu. Kuti uone kodhi yedu kubva kuTunes tichaita zvinotevera.
Nekiyi KUSVIRA takamanikidzwa, tinoenda kumenyu iTunes / Nezve iTunes.
Tichaona kuti yedu iPhone data inoonekwa uye, pakati pavo, pachave neIMEI.
Seyambiro, yeuchidza iwe izvozvo kodhi iyi ruzivo rwakakosha rwechinhu chako, saka Haufanire kupa iyo IMEI kune chero munhu kunze kwekunge zvanyatso kudikanwa. Ehe, usambozviburitsa pasocial network.
How kukiya iPhone kubudikidza IMEI
Vashandisi havagone kiya chishandiso neIMEI. Kana yedu iPhone ikarasika kana kubiwa, isu tichafanira kukumbira opareta wedu rubatsiro. Kuti uite izvi, zvakanakisa kufona, asi kutanga tichafanirwa kutsvaga iyo IMEI yechishandiso chatinoda kuvharira. Uye isu tingazive sei kuti chii IMEI yedu kana isu tisingakwanise kuwana runhare? Zvakanaka, rombo rakanaka, imwe yemaitiro ekuziva iyo IMEI ye iPhone yatatsanangura muchinyorwa chino inoitsanangura. Iyi ndiyo nzira nhamba yechina: isu tinongofanirwa kutsvaga iro bhokisi uye titarise chinamirwa pazasi (kana changorara munzvimbo yacho).
Iine IMEI inoonekwa, isu tine chete fonera opareta wedu ndokukumbira kuti ukiye foni yedu. Ivo zvirokwazvo vachatibvunza mimwe mibvunzo kuti tiongorore kuzivikanwa kwedu uye kuti isu tiri varidzi vepamutemo veiyo iPhone iyo yatinoda kuvharira, asi haifanire kunge iri dambudziko kana tiri chaizvo varidzi vechigadzirwa icho isu chatinoda kuvhara.
Chero zvazvingaitika, zviripo Tsvaga yangu iPhoneNdisati ndakiya foni yangu neIMEI, ndaiyedza kuiwana uye ndotobatana nemunhu akaiwana. Kune izvi, zvakakwana kuti isu tiende icbepa.com kana isu tinowana iko kunyorera kubva kune imwe iOS chishandiso. Kana tangopinda mukati tinogona kuigadzira seyakarasika, wedzera meseji pane yekukiya skrini, kuivhara kana kudzima zvirimo Iyo yakanakisa, pasina kupokana, ndeyekutevera maitiro aya:
Isa iyo iPhone mune yakarasika modhi.
Wedzera meseji pane yekukiya skrini. Iva nehanya zvikuru neshoko. Hazvikurudzirwi kuva nehasha zvakanyanya, nekuti inogona kunge yakabiwa kubva kwatiri uye inogona kuirasa, kuiputsa kana kuti ndiani anoziva zvingangotitsamwisa mukupindura meseji yedu. Ini ndaizoisa chimwe chinhu chakadai “Hi, une foni yangu. Kundipa kufona. Waita basa ”uye pamwe ungamuudza kuti aripi.
Ita mhete. "Kuti?" Unogona kunge uchishamisika, uye mhinduro ndeyekuti pamwe chero anayo haazive. Zvingaite kunge zvakapusa kwauri, asi mumwe murume akatora mukoma wangu iPad mumakwikwi achifunga kuti ndeyake, munin'ina wangu akandidana, ndakaigadzira mhete uye uyo aive akaitora akanganisa kunge iPad. Yese, uyo akadzoka kuzotora yake ndokusiya iyo yaakatora ne (inofungidzirwa) kukanganisa.
Nezvose zviri pamusoro, chero ane iPhone yedu anotozviziva izvo tinoziva kuti une nhamba yedu yefoni uye kuti ndeipi. Ndinovimba, unodzosera kwatiri uye chishandiso chichaenderera kushanda. Kana tikazvivharira neIMEI, iyo iPhone yaizove yakanaka mapepa ekurema kana ikadzokera kumuridzi wayo.
How dzokuzarura iPhone kubudikidza IMEI
Kunyangwe ichive chiri kujairika kushoma kutenga runhare pamushandi, uyu muitiro ucharamba uripo. Vazhinji vashandisi vanofarira kutenga foni yemahara pane yakasungirirwa kukambani, nekuti pakupedzisira tinobhadhara mari yakawanda. Asi ichokwadiwo kuti, sevose mariKuvimba neanoshanda kutenga mudziyo kunogona kuva zano rakanaka chero bedzi tisina mari yakakwana yekutenga kamwechete kana chichava chiitiko chakakosha kwazvo.
Aya mafoni anowanzo yakabatana nekambani uye ivo vanongoshanda chete neanoshanda kadhi kwavanosunganidzwa. Kunze kwekunge taisunungura. Sezvazvakaita mukukiya chishandiso neIMEI, kuvhura iyo iPhone isu tinodawo rubatsiro kubva kune vatatu mapato. Sarudzo yakanaka ndiyo imwe tinokupa iwe mu iPhone News inova LiberaiPhoneIMEI sevhisi. Ichokwadi chaizvo kuti tichagara tichitsvaira kuenda kumba, asi kuti pano uye muPatagonia, asi ichokwadiwo kuti mutengo wakakurumbira kuvhura iPhone i € 9.95 uye pano tine isingadhuri € 3 sarudzo. Ehezve, sekureba sekunge iwe usine hanya nekumirira anenge maawa matatu kuti ugamuchire kuburitswa.
Kuti uzarure iPhone ne Inokiinura iPhoneIMEI Isu tinongofanirwa kuisa yedu IMEI mubhokisi rinoenderana uye tinya pabhatani rePayPal, rinozotitorera kuakaundi yedu yePayPal kuti tiite muripo. Kuzarura kuchaitika mukati medu izwi rawasarudza. Kana iwe ukasarudza chakanyanya kukosha icho chine mutengo we € 6,95, zvakanakira kukanganwa nezvazvo kusvikira mushure memaawa matatu anoratidzwa neiyo mwero. Mushure memaawa matatu, isu tinosuma kadhi remushandi mutsva uye tarisa kuti iPhone yedu inoshanda ne SIM kubva kune imwe kambani, saka tichazoziva kuti yatove yemahara zvachose.
Inogona iyo IMEI yeiyo iPhone inogona kuchinjwa?
Hongu, asi kubva pa yekare vhezheni yeWindows. Nei isu tichida kuchinja iyo IMEI yefoni? Tinogona kuda kuchinja kodhi iyi kana tatenga iPhone yekare kunze kwenyika, sezvo isu taigona kunge takawana chimwe chinhu chine nhamba isiriyo munyika medu. Ehezve, ini handingakurudziri kubata chero chinhu kana iyo iPhone ikasatipa chero matambudziko. Ndokunge, tichaita iyo "kana ichishanda, usabate."
Chinja iyo IMEI ye iPhone maitiro akareruka anowanikwa nekuda kwechirongwa ZiPhone. Tichazviita nekuita anotevera matanho:
Isu tinosunungura iyo faira rakadzvanywa mune yakapfuura nhanho uye ndokuisiya pane desktop.
Tinodzvanya bhatani reWindows Start, vhura Run uye nyora "cmd" pasina makotesheni.
Takanyora "cd desktop / ziphone", Pasina makotesheni, mumunda wekutsvaga uye pinda Enter.
Isu tinoisa foni muDFU modhi. Kune izvi, tinodzvanya bhatani remagetsi uye bhatani repamba kudzamara taona logo yeApple, tobva tasunungura bhatani remagetsi ndokubata bhatani repamba kudzamara taona logo yeTunes netambo.
Isu tinonyora "Ziphone -u -ia 123456789012345" (nguva dzose pasina makotesheni) muchikumbiro chemirairo. Tichafanirwa kushandura iyo IMEI nhamba dzatinoda mune yapfuura kodhi.
Tinomirira chirongwa kuti tiwane zibri.tad faira uye titangise. Kana tangotanga, tichave tichitove kushandisa iyo nyowani IMEI.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » iTunes » Maitiro ekuziva iyo IMEI ye iPhone yako
Kana iwe ukabvisa tireyi panochengeterwa SIM, iwe uchaona kuti iyo IMEI uye iyo serial nhamba ye iPhone yako yakanyorwa mugoridhe.
helloz inoshanda mhinduro yako zvakare yeIPHONE4
Mhoro zvinhu zviri sei? Pane chero munhu anoziva nzira yekuwana iphone kubva kune isina kunaka bhendi? kana iwe unoziva kana mune imwe nyika iwe uchigona kubuda kunze kwechakaipa band?
Maita basa kwazvo ndanga ndisina chokwadi kana imei yaive patray yaive yechokwadi asi ndaitogona kutsvaga ndatenda futi
Pindura kuna dennis
Ndine iphone 5 uye ndakafona * # 06 # pafoni yangu kuti ndione kana yakabiwa uye inoratidza 00000000 pachinzvimbo cheyakajairika foni IMEI nhamba. Iwe unogona kundiudza izvo zvinorevei?
Jose Luis Rozas akadaro
Ndichitarisa kumashure kune iyo iPhone
Pindura José Luis Rozas
Pablo Garcia Lloria akadaro
Chorrapost mukwikwidzi wemwedzi
Pindura Pablo García Lloria
Edwin Azocar G akadaro
Midziyo mizhinji ine iyo imei kumashure. Asi ini ndinokurudzira kushandisa * # 06 # nekuti maChinese ane hunyanzvi. Nenzira iyoyo zvakachengeteka kuziva iyo chaiyo imei yechigadzirwa.
Pindura kuna Edwin Azocar G
Mune SIM tireyi, kana isina kuchinjwa ...
Jefferson Dominguez akadaro
Pane chero munhu anoziva kuchinja?
Pindura kuna Jefferson Dominguez
Ndingaone sei imei yangu kana foni yangu yarasika uye ini ndisina bhokisi…. batsira
Maria Ariza akadaro
Kana ini ndisingazive yangu IMEI uye nhare yangu yakabiwa. Ndinoziva sei iyo IMEI uye kukwanisa kuvhara foni kana kuiona?
Pindura María Ariza
Ndingaite sei kuvhura iyo iPad isina password?
kana ndingaite sei kuziva iyo imei yepad, iine yakavharwa?
Pindura kune aria